Semalt Expert: A Guideline To Filtering Subdomains MuGoogle Analytics
Mazuva ano, zvakakosha zvikuru kugadzira tsika dzema filters uye sub-domains kuGoogle Analytics. Izvozvo zvichakutendera kuti uongorore, uongorore uye uone mutsauko wewebsite yako uyewo mazvakabva. Pasinei nokuti une blog, webhusaiti yekambani, mapeji akawanda ekutenderera kana nzvimbo yakabatana, zvakakosha kufuta sub-domains.
Pano Andrew Andrehan, mumwe wevatungamiri vekutungamira kubva kune Semalt , ataura nezvemamwe mazano ari nyore munyaya iyi.
Gadzira Google Analytics
Danho rokutanga nderekugadzirisa Google Analytics mune ma subdomains. Iwe unofanirwa kushandisa imwechete kana yakasiyana yeUA ma code uye uchengete kuti iponese pane imwe pakombiyuta yako - payroll project management. Izvozvo zvingaita sezviri nyore, asi iwe unofanira kuyeuka kuti haisi nzvimbo dzose dzepaIndaneti dzinoshandisa imwechete nzvimbo dzeUA. Iwe unofanirwa kuumba mafikisi akasiyana-siyana e-sub-domains akasiyana uye woita kuti nheyo dzacho dzanyatsoiswa.
Ita maonero matsva muGoogle Analytics
Zvadaro, unofanirwa kuumba maonero matsva muGoogle Analytics. Kana ukangozarura kero yako yeGoogle Analytics uye enda kune dashibhodhi yako, unofanira kugadzirisa zvirongwa kubva pakona yepamusoro-kurudyi uko imenyu ye admin iripo. Pano iwe unogona kuisa mazita akawanda semadzinza. Chinhu chimwe chete chaunofanira kuyeuka ndechekuti iwe unosarudza mafikisi akasiyana-siyana kune mawebsite akasiyana-siyana uye unoita maonero matsva nguva dzose kana site yakaiswa pano..
Ita Maonero Ekutenda
Kana uri mutsva kuGoogle Analytics, tinokurudzira iwe kuti uite maonero ekuedzwa kuti urege kunetseka. Kune imwe nzvimbo yakatonga uye sub-domain, unogona kusimbisa maonero ekuenzanisa anozoita kuti iwe udzivise zvikanganiso zvose. Zvadaro unogona kuwana ruzivo rwemashoko ako matsva emotokari kuti uzive kuti izvi zvinoshanda sei.
Shandisa ma filters edu
Kana uchangobva kusika maonero matsva, danho rinotevera nderokushandisa zvipfeko zvetsika. Nokuda kweizvi, iwe unofanidza kusarudza tsika yechirongwa chemukati uye enda kunhepfenyuro redhiyo. Dzvanya pabhokisi uye uwedzere ma subdomain pano kuti utange. Kuwedzera tsika yefaira ndeimwe yenzira dzakazara uye dzinoshamisa kuti iwe uve nebasa rako rakaitwa zvakanaka.
Wedzera kutumirwa kunze kwezita
Kuwedzera kushandiswa kwekutsvaga mazita ndeye pfungwa yakanaka sezvo ichadzivirira ma subdomain kuti vasagamuchira zvisiri izvo uye zvishoma. Nokuda kweizvi, iwe unofanira kusarudza yako pfuma kana subdomain. Kana yave yakasarudzwa, unogona kuvhara bhatani rekutsvakurudza ruzivo uye uwane kuzodzosera kwakakwana kusanyorwa kwemashoko. Pano iwe unogona kuwedzera URL yako ye subdomain uye kutanga.
Chii chinonzi subdomain uye kuti ungaiona sei?
Kana uine mapeji mashomanana ayo maIndaneti ari www.abc.com kana chimwe chinhu, zviri nyore kwauri kuti uve ne-subdomain yeunosarudza uye nhamba yavo haigone. A subdomain is a domain one that is created under your main website and can be activated or deactivated anytime. Kazhinji kazhinji, kana vashandisi vanobva kune rimwe basa rekugamuchira kune rimwe, zviri nyore kwavari kuchengetedza maitiro akafanana uye izvi hazvizovhiringidzi ruzivo rwavo rose paIndaneti. Uyezve, kutora chikwereti chako chiri nyore sezvo zita guru rezita richabhadhara nekuda kwako uye kubhadhara kunotumirwa kubva kune yako kadhi rechikwereti kana PayPal yako.